Isahluko28. Ngaphandle Kweqiniso Kulula Ukucasula UNkulunkulu | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
“Ukubukeza kwakho iqiniso” empeleni akwenzelwa ukwenza abantu bathole ukuphila noma bathole izinguquko ezimweni zabo. Kunalokho, kwenziwa ukuze abantu bafunde ulwazi nezimfundiso ezithile ezingaphakathi eqinisweni. Babonakala sengathi bayayiqonda inhloso engemuva komsebenzi kaNkulunkulu, ngesikhathi empeleni befunde kuphela amazwi athile emfundiso. Abawuqondi umqondo ocashile weqiniso, futhi akwehlukile ekufundeni imfundiso yenkolo noma ukufunda uBhayibheli. Uqoqa lezi zincwadi noma leyo mibhalo, bese uba nale ngxenye yemfundiso noma leyo ngxenye yolwazi. Uyisikhulumi esisezingeni eliphezulu sezimfundiso—kodwa kwenzekani uma usuqedile ukukhuluma? Abantu khona-ke abakwazi ukuzwa, abanakho ukuqonda umsebenzi kaNkulunkulu futhi abanakho ukuziqonda kwabona. Ekugcineni, zonke izinto abayobe bezizuzile yizindinganiso zokwenza nje nemithetho, futhi bangakhuluma ngalezo zinto kodwa hhayi okunye. Ukuba uNkulunkulu wenza okusha, bekungenzeka ukuthi zonke izimfundiso ozaziyo zilingane nalokho uNkulunkulu akwenzayo? Ngakho, lezo zinto zakho ziyimithetho nje, futhi wena wenza nje abantu bafunde imfundiso yenkolo: Awubavumeli ukuba bahlangane nezwi likaNkulunkulu noma bahlangane neqiniso. Lezo ncwadi eziqoqwa abantu zingabaholela kuphela emfundisweni yenkolo kanye nolwazi, ezindinganisweni zokwenza kanye nemithetho namasiko. Azikwazi ukuletha abantu phambi kukaNkulunkulu, noma zivumele abantu ukuba baqonde iqiniso noma ukuqonda intando kaNkulunkulu. Ngokubuza umbuzo emva komunye ngalawo mazwi, bese uphendula, wakha uhlaka noma iqoqo lokubalulekile, ucabanga ukuthi labo abangaphansi bangakwazi kalula ukuwaqonda. Ngaphandle kokuba lula ukuwakhumbula, bayacacelwa ngale mibuzo bewabuka nje, futhi ucabanga ukuthi kuhle ukwenza izinto ngale ndlela. Kodwa lokho abakuqondayo akuyona incazelo ecashile yangempela yeqiniso; kuyehluka kokungokoqobo futhi kungamazwi nje emfundiso. Ngakho bekuyoba ngcono ukuba awuzenzanga nhlobo lezi zinto. Wenza lezi zinto ukuholela abantu ekuqondeni ulwazi futhi bafunde ulwazi. Ungenisa abanye ezimfundisweni, enkolweni, futhi ubenze balandele uNkulunkulu futhi bakholwe kuNkulunkulu ngaphakathi kwezimfundiso zenkolo. Awufani-ke nje noPawulu? Ucabanga ukuthi ukufunda ulwazi lweqiniso kubaluleke kakhulu, kanjalo futhi nokufunda ngenhliziyo iziqephu eziningi zamazwi kaNkulunkulu. Kodwa ukuthi abantu baliqonda kanjani izwi likaNkulunkulu akubalulekile neze. Ucabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuba abantu bakwazi ukubeka ekhanda amazwi kaNkulunkulu amaningi, ukwazi ukukhuluma imfundiso eningi nokuthola izindinganiso zokwenza ngaphakathi kwamazwi kaNkulunkulu. Ngakho-ke, nihlala nifuna ukuhlela lezi zinto ukuze wonke umuntu acule ekhasini leculo elifanayo futhi besho izinto ezifanayo, ukuze wonke umuntu akhulume izimfundiso ezifanayo, abe nolwazi okufanayo futhi agcine imithetho efanayo—lokhu kuyinhloso yenu. Nenza lokhu kube sengathi nenza abantu baqonde kangcono, lapho kokuphambana nalokho ningazi ukuthi ngokwenza lokhu ningenisa abantu phakathi kwemithetho engaphandle kweqiniso lamazwi kaNkulunkulu. Ukwenza abantu babe nokuqonda kwangempela kweqiniso, kufanele uxhumane nokungokoqobo, uxhumane nomsebenzi, futhi ulethe abantu phambi kukaNkulunkulu. Kungale ndlela kuphela lapho abantu bengafunda khona iqiniso. Uma imizamo yakho ibhekiswe kuphela ekusebenziseni izindinganiso zokwenza kanye nemithetho emazwini abhaliwe, khona-ke ngeke ukwazi ukufinyelela ekuqondeni iqiniso, ngeke ukwazi ukuholela abantu kokungokoqobo, futhi ingasaphathwa eyokwazi ukuvumela abanye ukuba bezwe ukuguquka okwengeziwe noma baziqonde bona ngokwengeziwe. Uma amazwi abhaliwe engathatha indawo yabantu, khona-ke ngeke nidinge kwenza lutho nhlobo.
Anikayitholi imithetho yamazwi kaNkulunkulu, futhi abantu abaningi basho lokhu: “Akukho mqondo emazwini kaNkulunkulu. Wonke umbhalo uphethe lonke uhlobo lokuqukethwe futhi kunomqondo owehlukile kuso sonke isiqephu nakuwo wonke umusho okwenza kube lukhuni kithi ukukhumbula futhi kube lukhuni ukuqonda. Akunakwenzeka ngisho ukuqoqa umqondo osobala wesigaba.” Izwi likaNkulunkulu aliyona inoveli, futhi aliwona umbhalo osandaba noma incwadi yokufundwa. Liyiqiniso; liyizwi elinika umuntu ukuphila. Izwi aliyona into engaqondwa ngokuyetshisa emqondweni wakho, noma imithetho yayo ikwazi ukuqoqwa ngokufaka amandla athe ukwengezwa. Ngakho noma ngabe iyiphi ingxenye abantu abanokuqonda okuncane ngayo noma abanomqondo othile ngemithetho yayo, kungaba kuphela ukuqonda okusohlangothini olulodwa, okukha phezulu, iconsi elilodwa olwandle, futhi akukwazi nhlobo ukufinyelela kulokho uNkulunkulu ayekuhlosile ekuqaleni. Noma yimuphi umbhalo wamazwi kaNkulunkulu uzoqukatha izingxenye ezimbalwa zeqiniso. Ngokwesibonelo, umbhalo okhuluma ngemfihlakalo yokuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu uyofaka ukubaluleka kokuba sesimweni somuntu kanye nomsebenzi owenziwa ukuba sesimweni somuntu. Futhi uzoqukatha ukuthi abantu kufanele bakholwe kanjani kuNkulunkulu, futhi kungaphatha ukuthi abantu kufanele bamqonde futhi bamthande kanjani uNkulunkulu; uyofaka izingxenye eziningi zeqiniso. Ukuba, ngokokucabanga kwakho, ukubaluleka kokuba sesimweni somuntu kwakuqukethe izingxenye ezimbalwa kuphela futhi zazingabekwa ngemisho embalwa, yimuphi-ke umphumela ongakwazi ukufezwa ngumsebenzi kaNkulunkulu kumuntu? Abantu benziwa ukuthi baqonde ukubaluleka kokuba sesimweni somuntu kukaNkulunulu ukuze benziwe baqonde uNkulunkulu. Emva kokuba umuntu eqonde uNkulunkulu, ngokwemvelo uba nenhliziyo ehlonipha uNkulunkulu, futhi lokhu manje kubandakanya ukwenza komuntu. Ngakho akukho ngxenye yamazwi kaNkulunkulu futhi akukho ngxenye yeqiniso elula njengoba ucabanga. Uma uthatha izwi likaNkulunkulu nolimi lobunkulunkulu njengento elula, ucabanga ukuthi noma yimuphi umbuzo ungaphendulwa ngesigaba samazwi kaNkulunkulu, khona-ke lokho akulona iqiniso. Wonke umbhalo uqukethe amacala amaningi amazwi kaNkulunkulu akhulunywa kuvelwa kuwo futhi ayikho indlela abantu abangaqoqa noma babukeze ngayo amazwi kaNkulunkulu. Emva kokuba usubukeze amazwi Akhe, ucabanga ukuthi lesi siqephu siwuphendulile umbuzo engenhla, kodwa lesi siqephu futhi sihlobene neminye imibuzo. Ngakho uthini kulokho? Iqiniso liqukethe izinto eziningi. Kungani kuthiwa iqiniso lingukuphila, ukuthi lingaletha ukuthokoza kumuntu, ukuthi akunakuhlanganwa nalo lonke ngisho ekuphileni okuphindwe kaningi noma eminyakeni engamakhulu amaningi? Ake sithi ubuzobukeza ingxenye ethile yeqiniso noma isiqephu esithile samazwi kaNkulunkulu, bese ubuza umbuzo ngakho. Khona-ke, ngokwalo mbuzo, ubuzofunda lesi siqephu, bekuyoba sobala ukuthi lesi siqephu sifundwa njengempendulo yalowo mbuzo. Ngakho lesi siqephu sesiyindinganiso yokwenza, umthetho nemfundiso, futhi asiyilo iqiniso. Noma kungaguqukile ngisho elilodwa lamazwi asekuqaleni, kusobala ukuthi lokhu kuyingxenye yemfundiso, futhi akulona iqiniso. Kungani? Ngoba umbuzo owubuzile ubuzwe ngokungalungile. Uholele abantu ekubeni baduke futhi wabangenisa ezimfundisweni, wabenza bacabanga, bakha imifanekiso emakhanda, bacabanga ngalo mbuzo, base befunda lesi siqephu ngokuhambisana nezimfundiso zakho, befunda besebenzisa umbono wemfundiso yakho. Bebezoyifunda-ke beya emuva naphambili, bebona kuphela umbuzo owodwa futhi bengaboni enye ingxenye. Ekugcineni bebezolethwa endaweni lapho bengeke bezwe khona iqiniso futhi bengeke bezwe khona izwi likaNkulunkulu, indawo lapho bengazihlomisa kuphela futhi baxoxe ngezimfundiso nalapho bengakwazi khona ukuqonda uNkulunkulu. Konke abebengakukhuluma-ke bekuyoba yizimfundiso ezizwakala kamnandi, izimfundiso ezilungile, kodwa bekungeke kube khona okungokoqobo ngaphakathi kwabo futhi bebengeke babe nendlela abangayihamba, lolu hlobo lokuhola ngempela lwenza umonakalo omkhulu!
Yikuphi okungathandeki kakhulu ekusebenzeleni komuntu uNkulunkulu? Uyazi? Labo benu abasebenza njengabaholi bahlala befuna ukuba nokuhlakanipha okukhulu ngokwengeziwe, ukuphakama kakhulu ngaphezu kwabanye, ukuthola amaqhinga amasha ukuze uNkulunkulu abone ukuthi wazi kangakanani ngempela. Nokho, awugxili ekuqondeni iqiniso nokungena kokungokoqobo kwezwi likaNkulunkulu. Uhlala ufuna ukubukisa; ngabe lokhu akukhona kanye ukwembulwa kwemvelo yokuzithwala? Abanye baze bathi, “Ngokwenza lokhu ngiqinisekile ukuthi uNkulunkulu uzojabula kakhulu; uzokuthanda kakhulu ngempela. Kulokhu ngizokwenza uNkulunkulu abone, ngimmangalise kamnandi.” Ngenxa yalokhu kummangalisa uzosuswa. Ungamane nje wenze ngokugagamela noma yini efika emqondweni wakho. Kungalunga kanjani ukungacabangi ngemiphumela? Lapho labo benu abacasula isimo sikaNkulunkulu futhi bacasule izinqumo Zakhe zokuphatha besuswa-ke, ngeke kube namazwi ongawasho. Akunandaba nenhloso yakho, akunandaba ukuthi ukwenza ngamabomu noma cha, uma ungasiqondi isimo sikaNkulunkulu noma ungayiqondi intando kaNkulunkulu, uyomcasula kalula uNkulunkulu futhi uyozicasula kalula izinqumo Zakhe zokuphatha; lokhu kuyinto wonke umuntu okufanele ayiqaphe. Uma uke wacasula kakhulu izinqumo zikaNkulunkulu zokuphatha noma ucasula isimo sikaNkulunkulu, uNkulunkulu ngeke acabange ngokuthi ukwenze ngenhloso noma ngokungenanhloso; lokhu kuyinto okufanele uyibone ngokucacile. Uma ungakwazi ukulubona kahle lolu daba, khona-ke ngokuqinisekile unenkinga. Ekusebenzeleni uNkulunkulu, abantu bafuna ukuthatha amagxathu amakhulu, benze izinto ezinkulu, bakhulume amazwi amakhulu, benze umsebenzi omkhulu, bashicilele izincwadi ezinkulu, babambe imihlangano emikhulu futhi babe abaholi abakhulu. Uma uhlala unezifiso ezinkulu, khona-ke uyocasula izinqumo ezinkulu zokuphatha zikaNkulunkulu; abantu abanje bafa masinyane. Uma ungaziphethe kahle, ungenabunkulunkulu noma ungenakuhlakanipha ekusebenzeleni uNkulunkulu, kungekude uzocasula izinqumo zokuphatha zikaNkulunkulu. Uma ucasula isimo sikaNkulunkulu, ucasula izinqumo Zakhe zokuphatha, ngalokho wone kuNkulunkulu, khona-ke ngeke abheke ukuze abone ukuthi ukwenze ngasiphi isizathu lokhu, noma ukuze abone izinhloso zakho. Ngakho ucabanga ukuthi uNkulunkulu akacabangi? Ngabe akanamusa kubantu? Cha. Kungani ngithi cha? Ngoba abantu abazona izithulu, iziwula noma izimpumputhe. Niyabona futhi niyezwa nonke, nokho futhi usenza icala. Yikuphi ukucabanga osengakhuluma ngakho? Noma ngabe awugodle zinhloso, uma wenza icala, kufanele ubhubhe futhi uzwe ukujeziswa. Sikhona isimo sakho esidinga ukucatshangwa? Akekho ophoqwa ngokukhonjwa ngommese ukuba acasule izinqumo zokuphatha zikaNkulunkulu noma isimo sikaNkulunkulu. Lokho akwenzeki nje. Uma umuntu ebeke ummese entanyeni yakho wakuphoqa, ethi: “Qalekisa uNkulunkulu wakho. Emva kokuba usumqalekisile ngiyokunika imali futhi ngeke ngikubulale.” Mhlawumbe kulolu hlobo lwesimo ubungasho ukuhlambalaza okuthile ngoba kuphela wesaba ukufa. Singenzeka isimo esifana nalesi? Izinto ezifiki kulokhu, akunjalo? Ukuthi isimo sikaNkulunkulu ngeke sivumele ukucasulwa kuwumqondo ocashile. Nokho izijeziso zikaNkulunkulu zisekelwe ezimweni zabantu nezizinda zabo. Esinye isimo yilapho umuntu engazi ukuthi Yena unguNkulunkulu ngakho bese emcasula. Ukwazi ukuthi unguNkulunkulu kodwa uqhubeke umcasule ngamabomu ngesinye isimo. Uma umuntu azi ngokugcwele ukuthi unguNkulunkulu kodwa aqhubeke nokumcasula, khona-ke lowo muntu kufanele ajeziswe. UNkulunkulu uveza okuthile kwesimo Sakhe kuzo zonke izigaba zomsebenzi Wakhe—ngabe abantu bayakubona lokhu? Ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu usebenze iminyaka eminingi kakhulu, ngabe abantu abasazi isimo Sakhe nokuthi yiziphi izinto abantu abazenzayo noma abazishoyo ezingase zicasule uNkulunkulu? Futhi izinto ezichazwa yizinqumo zokuphatha zikaNkulunkulu—okufanele abantu bakwenze nokungafanele bakwenze—ngabe abantu abazazi nazo? Abantu abakwazi ukuqonda izinto ezithile eziphathelene neqiniso noma nesimiso. Lokho kungenxa yokuthi abakafiki kulelo zinga, ngakho-ke abanandlela yokuqonda. Kodwa izinqumo zokuphatha zikaNkulunkulu zingaphakathi komkhawulo obekiwe futhi ngezemithetho. Akudingekile ukuba abantu baze baziqonde noma ngayiphi indlela, ukuthi nje kufanele bahloniphe umqondo wazo osobala. Ngabe lokhu yinto umuntu okufanele abhekane nayo? Awunaki lutho futhi awumesabi uNkulunkulu, ngakho kufanele wehlelwe ukujeziswa!
Okwedlule：Isahluko 23. Indlela Yokuqonda Ubunye Benyama Nomoya KaNkulunkulu
Okulandelayo：Isahluko 34. Ukubaluleka Nendlela Yokwenza Umthandazo
Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II Ngabe Umsebenzi kaNkulunkulu Ulula Njengoba Umuntu Ecabanga? Isahluko 1 UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III